Millatariga Aljeeriya Oo Ku Baaqay In Xilka Laga Qaado Madaxweyne Bouteflika – somalilandtoday.com
Millatariga Aljeeriya Oo Ku Baaqay In Xilka Laga Qaado Madaxweyne Bouteflika
(SLT-Aljeeriya)-Taliyaha Militariga dalka Aljeeriya Gen.Ahmed Gaid Salah ayaa khudbad uu xalay ka baahiyey telefishinka dalkaasi ugu baaqay Baarlamaanka inay xilka ka qaadaan Madaxweynaha waayeelka ah ee Cabdicasiis Bouteflika oo xiligan xanuunsan.
Hogaamiyaha militariga oo awood badan kuleh dalkaasi ayaa sheegay in qodobka 102aad ee Dastuurka dalkaasi u fasaxayo in Baarlamaanka xilka ka qaado Madaxweynaha hadii uu xanuunsan yahay oo uusan shaqadiisa gudan karin.
Xildhibaanada ayaa awood u leh go’aankan hadii Sadex meelood ay laba meel ay u codeeyaan in Madaxweynaha xilka laga qaado, hadii xilka laga qaado Madaxweynaha waxaa si kumeel gaar ah xafiiska u qaban doona Guddoomiyaha Aqalka Sare oo xilkaasi heynaya muddo 45 maalmood ah, sida uu dastuurka qorayo.
Hadalka kasoo yeeray hogaanka militariga Aljeeriya ayaa imaanaya xili ay wadankaasi ka socdaan banaanbaxyo balaaran oo ay shacabka ku codsanayaan in xilka laga qaado Madaxweynaha.
Tan iyo bartamihii bishii Feberaayo ayey shacabka dhigayeen mudaharaadyo looga soo horjeedo in Madaxweyne Bouteflika oo ah 82 sano jir uu markii 5aad xilka u tartamo doorashadii la qorsheeyey inay dhacdo bisha soo socota ee April.
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in uusan doorashada soo socota isu sharixi doonin balse uu dib u dhigay doorashadii isla markaana uu xilka sii heyn doono kaliya illaa inta laga ansixinayo dastuur cusub, go’aankaasi oo ah mid xilka uu kusii kororsaday, shacabka ayaa diiday go’aankaasi iyagoo weli sii wada banaanbaxa.
Militariga iyo xisbi xaakimka dalkaasi ayaa hada u muuqda inay qorshahoodii wax ka bedaleen iyagoo horey u doonayey in Madaxweyne Bouteflika ay xilka kusii hayaan, ayna hada rabaan inay hogaamiye cusub ku bedalaan.
Shacabka dalkaasi ee Mudaharaadka wada ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan qorshaha Militariga isla markaana doonayaan in isbedal dhameystiran oo dimuquraadi ah uu dalkaasi ka dhaco.